घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू Dayot Upamecano बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो Dayot Upamecano को जीवनी उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, कारहरु, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवन को बारे मा तथ्यहरु चित्रण।
सरल शब्दहरूमा भन्ने हो भने यो फुटबलरको जीवन यात्राको कहानी हो जुन उसको बाल्यकालदेखिको दिनदेखि लिएर जब उनी प्रख्यात भए। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकालको जाँच गर्नुहोस् - डेयोट उपमेकेनोको बायोको एक सारांश।
हेलो- Dayot Upamecano प्रारम्भिक जीवन र उठो।
हो, तपाईं र मलाई थाहा छ कि डेयट एक रक्षात्मक जनावर हो, जसलाई धेरैले आफ्नो उत्तराधिकारी भएको मान्दछन् Raphael Varane.
यद्यपि, केवल एक हातले फुटबल प्रेमीहरूले Dayot Upamecano को जीवनी पढ्ने बारेमा विचार गरेका छन् जुन हामीले तयार गरेका छौं र रमाईलो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Dayot Upamecano बचपन कहानी:
सुरू गर्न, उनको पूरा नामहरू छन् Dayotchanculle Oswald Upamecano र उसको उपनाम हो "Dayot“। डिफेन्डर मा जन्म भएको थियो अक्टोबर १ 27 1998 XNUMX को २th औं दिन इभ्रेक्स मा उनको आमा बुबा लाई, एक कम्युन विभाग मा स्थित एक कम्युन, नोर्मान्डी, फ्रान्स को क्षेत्र।
यदि तपाइँलाई थाहा थिएन भने, उनको जन्म फ्रान्स १ 1998 XNUMX world वर्ल्ड कप पछिको तीन महिना पछि भयो। उनको जन्म पछि, Dayot Upamecano का आमा बुबाले उनलाई नाम दिने निर्णय गरे “Dayotchanculle”एक कारणको लागि। नाम 'को रूपमा उसलाई दिइएको थियोस्वेच्छा'(SoFoot रिपोर्टहरू) र यो उहाँको महान हजुरबा हजुरआमाको नाम हो।
Dayot Upamecano पहिलो छोरा र संभवतः दोस्रो परिवारको रूपमा जन्मिएको थियो जुन परिवारमा महान फुटबल प्रेमी भनेर चिनिन्छ। उनले आफ्नो शुरुआती वर्षहरू आफ्नी जेठी बहिनी र बच्चा भाईसँग खुशी खुशी हुँदै हुर्काए जसलाई उनले आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा देखे।
Dayot Upamecano परिवारको उत्पत्ति:
उसको हेराईबाट हेरोद, तपाईं मसंग सहमत हुनुहुनेछ कि डिफेन्डर उसको परिवारको जरा फ्रान्सबाट टाढा हुन सक्छ। तपाईंले अनुमान गर्नुभए जस्तै, डायोट उपमेकानो परिवारको उत्पत्ति अफ्रिकाबाट भएको हो - ठीक गुनी-बिसाउ।
गुयना-बिसाउ पश्चिमी अफ्रिकाको अटलान्टिक तटमा उष्णकटिबंधीय देश हो, यो देश जुन यसको राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरूको लागि परिचित छ। Dayot Upamecano को अभिभावक को एक मा एक नजर- उसको प्यारो बुबा, कुनै शंका बिना, उनको अफ्रिकी मूल बताउँछ।
Dayot Upamecano बुबाको फोटोले तपाईंलाई उसको परिवारको मूल बुझ्न सहयोग गर्दछ। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
तपाईंलाई थाँहा थियो?… डायोट उपमेकानोका आमाबुवा (उनका बुवाको नेतृत्वमा) उनको नाम दिए "Dayotchanculle“- जुन वास्तविकतामा, टापुको गाउँ प्रमुखका लागि सम्मानजनक पदवी हो Jeta Caoi जुन उनको परिवारको गृहनगर बिसाउ हो।
Dayot Upamecano बचपन कहानी- प्रारम्भिक जीवन:
फ्रेन्चको भ्रेक्स छिमेकमा हुर्किएकी युवा डियोटको लागि उत्साहजनक थियो। प्रारम्भमा, उहाँ बस्नुभयो र फुटबल खेल्नुभयो (फुटसल वा पाँच-एक-साइड फुटबल जटिल) बिहान देखि रात सम्म। उसले आफ्नो मिल्ने साथीसँग त्यो गरे जुन साथी फ्रान्सेली फुटबलरबाहेक अरू नै छैन। Ousmane Dembele। आफ्नो बाल्यावस्थाको अनुभवको बारेमा बोल्दै, डायोटले एक पटक भने;
“ओस्माने र अन्यसँग हामी सबै समयमा फुटबल खेल्थ्यौं। हामी फुटसल पनि खेल्थे। प्रारम्भमा, हामीले हाम्रो प्रविधि, आक्रामकतामा काम गरेका छौं। हामी सीमा बिना खेल्दछौं। अनि यसले हामीलाई धेरै मदत ग .्यो। ”
एउटा बच्चाको रूपमा, Dayot Upamecano पिच मा राम्रो थिएन। किनभने फुटबल पारिवारिक आवेग थियो, जवान केटा आफ्नो परिवारको सदस्य दुबै सल्लाहकार र सहयोगीको रूपमा पाउँदा भाग्यशाली थियो।
उदाहरणका लागि, डेयट उपमेकानोका बुवाले उनलाई राम्रो कडा परिश्रम गरे जुन उनी एउटा राम्रो फुटबल एकेडेमीमा स्वीकृत हुनेछन्। धन्यबाद, उनले आफ्नो पहिलो फुटबल खेल्ने चरण सुरु गरे Vaillante एस Angers (2004-2007) र FC De Prey (2008-2009)।
Dayot Upamecano बचपन कहानी- प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
२०० साल उसको छिमेकमा बच्चाहरूका फुटबलरहरूको लागि उत्कृष्ट वर्ष थियो। त्यो वर्षको नयाँ क्लब एकेडेमी देखियो "इभ्रेक्स फुटबल क्लब २ 27"आफ्नो परिवारको घरबाट टाढा टाढासम्म अपरेसनहरू सुरू गर्नुहोस्। भाग्यशाली Dayot र आफ्नो सबै भन्दा राम्रो साथी Ousmane Dembélé एकेडेमीको साथ ट्रायल पास गर्नेहरू मध्ये पहिलो थिए।
Dayot को लागी, Evreux मा जीवन पहिले सजिलो थिएन। तपाईं एक धेरै कलिलो उमेर देखि उनको खुट्टा जमीन मा थियो। डायोटले एक पटक दावी गरे कि उनले अरूहरू भन्दा बढी काम गरे (धेरै जसो एकल मोड) जबकि उसले त्यहाँ खेलेको थियो। उसको शब्दमा;
"इभ्रेक्समा, प्रशिक्षणको अन्तमा, म अझै पनि बललाई लात लिन जान्छु। यसले मेरो लागि काम गर्यो र यो मेरो सफलताको मूल कुरो थियो। "
Dayot Upamecano जीवनी- फेम कहानी कहानी:
इभ्रेक्समा कडा परिश्रम अन्ततः भुक्तान गरियो किनकि यसले भाग्यशाली डायोटलाई एकेडेमी द्वारा बोलाइएको थियो। उसले एभ्रेक्स छोड्यो (फ्रान्सेली फुटबल लीग प्रणालीको पाँचौं तह) लाई Valenciennes FC (फ्रान्सेली फुटबल लीग प्रणाली को दोस्रो स्तर)।
Valenciennes FC मा हुँदा, Dayot Upamecano यो सबै भन्दा राम्रो हुनुको छैन तर हरेक खेलमा उहाँमा एक क्रोध भएको महसुस गरे। कहिलेकाँही उनलाई बीचमा खेल्न भनियो, जुन उसले राम्रो गर्यो, गोल पनि गरी। जे भए पनि कोचले उनलाई राख्यो, उनले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र परिपक्वताका साथ खेले। भ्यालेन्सिएन्स वास्तवमै बढ्दो डिफेन्डरको लागि धेरै राम्रो सम्झन थियो जो उसको साथी र एकेडेमी साथीको साथ चित्रित छ।
चित्रित जवान केटाले (बायाँ) भ्यालेन्सिएन्ससँग आफ्नो समयको आनन्द उठाए। यहाँ, उसलाई क्लबको प्रशिक्षण केन्द्रमा चित्रित गरिएको थियो। क्रेडिट: फ्रान्सब्ल्यू
बोल्ड निर्णय लिने:
२०१ 16 को गर्मीमा १ 2015 वर्षको उमेरमा फ्रान्सेली डिफेन्डरले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे। उनले हरियो घाँसहरुका लागि विदेशमा आफ्नो पूरै परिवार र देश छोडे।
Dayot Upamecano का बाबुआमाले आफ्नो छोराको विदेशमा उसको फुटबल खेल्ने निर्णयलाई सहमति जनाए अस्ट्रिया। उसको निर्माण-परिपक्वताका लागि धन्यवाद, पन्ध्र वर्षको उमेरमा घर छोड्न यति गाह्रो भयो।
जवान केटा १ 15 वर्षको उमेरमा आफ्नो परिवार र देश छोड्न पर्याप्त परिपक्व थियो। क्रेडिट: Gtalenti
Dayot विदेश संग जीवन शुरू भयो लिफ्ट गर्दै, रेड बुल साल्जबर्ग द्वारा बोलाउनु अघि अष्ट्रियन दोस्रो डिभिजन क्लब (माथि चित्रित)। रेड बुल साल्जबर्गले उसलाई अधिक परिपक्व बनाउँथ्यो, भाषा सहित धेरै क्षेत्रमा उसलाई मद्दत गर्‍यो। उसको शब्दमा;
“म जस्तो धेरै विदेशीहरू थिए। मैले भाषा सिक्नुपर्‍यो। शिक्षकहरू वास्तवमै ठूलो थिए। ”
Dayot Upamecano जीवनी- प्रसिद्धि गर्न को लागी:
रेड बुल साल्जबर्गमा, डायोटलाई थाहा थियो कि शक्ति फुटबलमध्ये केही क्षमताहरू हुन् जुन आधुनिक फुटबलमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्। यसले उनलाई प्याक अन मसलको प्याक निर्माण गर्न कट्टर शासनमा पुर्‍यायो। जर्मन-आधारित आरबी लाइपजिगमा उनको धेरै-प्रतीक्षित स्थानान्तरण भएको समयमा, डिफेन्डर पहिले नै एकमा परिणत भएको थियो फुटबल गोलिथ।
१ of वर्षको उमेरमा, जवान डिफेन्डर गोलियाथ भइसकेको थियो। क्रेडिट: खेलकुद
प्रशंसकहरूले उनलाई हौसला दिएका गुणहरू मध्ये एउटा त्यो हो कि उसले बल चोर्नका लागि आफ्नो लामो भारी खुट्टाहरू फैलायो। अधिक, उहाँको 6feet - 1 इंच मांसपेशिहरु को उचाई, कुनै श doubt्का बिना, कुनै बाधाले मुश्किलले पार गर्न सक्ने एक अवरोध हो। तल अवलोकन गरे अनुसार Rocky Defender सक्षम छ प्रत्येक शारीरिक संघर्ष र हावा बल मा हावी, उनी व्यावहारिक अपराजेय छ।
रकी डिफेन्डर हरेक शारीरिक संघर्ष र उच्च बल मा हावी गर्न सक्षम छ। क्रेडिट: आईजी
Hugely द्वारा रूपान्तरण जुलियन नागल्समन, Dayot सेन्ट्रल डिफेन्डिंग पछि स्थिति को लागी एक सबैभन्दा सुन्दर फ्रान्सेली वाचाहरु को एक मानिन्छ राफेल Varae र Aymeric Laporte. बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो.
Dayot Upamecano को प्रेम जीवन - एकल, प्रेमिका वा पत्नी ?:
हो! ... चट्टानी डिफेन्डर केवल आफ्नो प्रभावशाली फुटबल प्रदर्शन को लागी समाचार बनाउँछ। जहाँसम्म, दुबै प्रशंसकहरु र प्रेस द्वारा उसको प्रेम जीवन को बारे मा जान उत्सुक इच्छा हो। त्यसैले प्रश्न- Dayot Upamecano की गर्लफ्रेंड?… के त्यो एक गोप्य श्रीमती छ?… त्यहाँ एक वैग छ?
Dayot Upamecano को प्रेमिका को हो- त्यो अविवाहित, डेटि or वा विवाहित हो। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
वेबमा घण्टा गहन अनुसन्धान पछि, हामी यो अनुभूतिमा आएका छौं कि डेयोट अपमेकानो (लेखनको समयमा) अझै उसले आफ्नो सम्बन्ध सार्वजनिक बनाएको छैन। कसलाई थाँहा छ?… उसको गोप्य प्रेमिका हुन सक्छ तर त्यसलाई सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरेको छ।
तपाइँलाई थाँहा छ कि प्रारम्भिक क्यारियर चरणमा सम्बन्ध उजागर गर्ने जोखिमपूर्ण हुन सक्छ (क्यारियर बर्बाद) र युवा फुटबलको लागि अन-क्षमा। हुनसक्छ, डायोट उपमेकानोका आमा बुबा र सल्लाहकारहरूले उनलाई आफ्नो प्रेम जीवन निजी राख्न सल्लाह दिएका छन्।
Dayot Upamecano व्यक्तिगत जीवन:
आफ्नो अन-पिच रक्षात्मक कर्तव्यहरुबाट टाढा आफ्नो व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू चिन्नु पक्कै पनि तपाईको व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
सुरूवात गरेर, Dayot धेरै चंचल भएको एक विशेषता छ। जे होस्, जब ऊ पिचमा जान्छ उसले आफैलाई परिवर्तन गर्दछ, धेरै गम्भीर बन्छ। जनावर। एचe एक त्यस्तो व्यक्ति हो जुन प्रकृतिले उसलाई के प्रदान गर्छ भन्नेमा अत्यन्त सहज महसुस गर्दछ।
Dayot Upamecano व्यक्तिगत जीवन- उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्छ जसले प्रकृतिले उसलाई प्रदान गर्ने कुरालाई माया गर्छ। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि, फुटबलर ट्याटुहरूमा ठूलो छैन। अन्तमा, उहाँ संसाधन, बहादुर, भावुक, एक साँचो मित्र र नेता हुनुहुन्छ।
Dayot Upamecano पारिवारिक जीवन:
फुटबल स्टारडम जाने सडक यति मनमोहक हुने थिएन किनकि यो परिवारका सदस्यहरूको मद्दत बिना नै छ। यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई Dayot Upamecano परिवारका सदस्यहरूको बारेमा आफ्ना माता-पितासँग शुरूवात गर्दछौं।
Dayot Upamecano बुबा को बारे मा:
र सबैभन्दा पहिला, Dayot का बुबा एक टिलर हुनुहुन्छ (टाईल्स लगाउने व्यक्ति) पेशा र एक फुटबल प्रेमी द्वारा। उसको छोरामा फुटबलको खेल निषेधको लागि श्रेय दिईन्छ। डायोटको लागि, गिनिया-बिसाउको ठ्याक्कै यात्रा गर्नु भन्दा राम्रो केही छैन इलाहा जेटा (उसको परिवार गृहनगर) उसको बुवा हजुरबा हजुरआमा र अन्य विस्तारित परिवार सदस्यहरू हेर्न।
डायोट उपमेकानोका बुबालाई भेट्नुहोस् जसले आफ्ना छोरासँगै गिनी-बिसाउमा उनीहरूको मातृभूमि भ्रमण गर्ने विचारलाई प्रेम गर्दछन्।
Dayot Upamecano को आमाको बारेमा:
सबैभन्दा पहिला र, दियोतकी आमा पेशेमा कपाल थिई। यो खुलासा भएको थियो जब डिफेन्डरसँग कुरा गर्‍यो फ्रान्स-Bleuफ्रान्स मा एक स्थानीय रेडियो स्टेशन। एभर्टनको विपरीत टम डेभिस, Dayot आफ्नो आमाको पेशाको गर्व गर्दैन - यसैले यसले आफ्नो रूपमा देखाउँदछ। उहाँ तेजस्वी कपाल शैली / कपाल काट्ने काममा हुनुहुन्न, उहाँ दुबै खेलाडी आमा हुनुहुन्छ तर कपाल पनि।
Dayot Upamecano का भाई बहिनीहरूको बारेमा:
जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ, Upamecano दुई भाई बहिनीहरू छ; एक ठूलो बहिनी र एक सानो भाइ। उसको भाईबहिनीसँग उसको घनिष्ठता उसले पिचमा आफैंलाई प्रतिबद्ध गर्ने तरिका जस्तै छ। डायोटले एक पटक आफ्नो सोशल मिडिया खातामा खुलासा गरे कि उनको सानो भाई (तल चित्रित) उसको उत्तराधिकारी हो। निहित द्वारा, यसको शाब्दिक अर्थ भनेको उसको भाइ पनि एक फुटबल खेलाडी र निर्माणकर्ता हो।
Dayot Upamecano का भाइबहिनी - एक ठूलो बहिनी र एक सानो भाई जो निर्माण मा एक फुटबलर छ भेट्नुहोस्। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
Dayot Upamecano जीवन शैली तथ्यहरु:
करीव २ मिलियन यूरोको नेट वर्थ र M० मिलियन युरो भन्दा बढीको बजार मूल्यको साथ, यो उपेक्मेकोनो एक करोडपति फुटबलर हो भन्नु उचित छ। Noe यहाँ एक प्रश्न आउँछ! डिफेन्डरले एक हप्तामा कमाएको उसको € salary०, salary१50,813 को तलबबाट के गर्छ?… यो खण्डले यो सबै प्रकट गर्दछ।
सुरू गर्दै, dपिचमा व्यावहारिकता र आनन्दको बीचमा एक्किडिंग यो अपमेकानोका लागि गाह्रो विकल्प होईन। डिफेन्डर आफ्नो हप्ताको तलबमा € 50,813 खर्च गर्न खर्च गर्दछ यसमा डेजर्ट सफारी राइडहरू अरब डेजर्ट सफारी दुबईमा अवस्थित - संयुक्त अरब अमीरात।
Dayot Upamecano को जीवनशैली- उहाँ वास्तवमै केही राम्रो चीजहरूको साथ पागल हुनुहुन्छ। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
को लागी उनीको व्याकुलता मरुभूमि सफारी सवारी, Dayot पनि आफ्नो स -्ग्रह कमाएको पैसा खर्च डु boat्गा सवारीको खर्च गर्न मन पराउछ छुट्टीको समयमा। उसले सामाजिक जीवनमा विदेशी कारहरू, ठूला घरहरू (हवेलीहरू) आदि प्रदर्शन गर्नुको सट्टा यस जीवनशैलीलाई प्राथमिकता दिनेछ।
Dayot Upamecano अनटोल्ड तथ्यहरू:
मानिसहरू तथ्यहरू बिर्सन्छन्, तर तिनीहरूलाई बाल्यकालका कथाहरू सम्झिन्छन्। Dayot Upamecano को जीवनीको यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई केही तथ्यपूर्ण ज्ञान प्रदान गर्नेछौं जुन तपाईंलाई डिफेन्डरको बारेमा कहिल्यै थाहा थिएन।
जनवरी २०१ 2017 मा डिफेन्डरले रेड बुल लाइपजिगसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो, जसमा उनले एक ठूलो तलब जालिएको देखे। M. M मिलियन यूरो प्रति वर्ष। क्रुन्च डेयोट उपमेकानोको तलब साना नम्बरहरूमा, हामीसँग उनको प्रतिमाह आय, हप्ता, दिन, घण्टा, मिनेट र सेकेन्ड हुन्छ।
उसको आय € (युरो) मा
उसको आय डलरमा ($)
के उसले प्रति वर्ष कमाउँछ € 2,500,000 £ 2,201,505.6 $ 2,701,247.37
के उसले प्रति महिना कमाउँछ € 208,333.3 183,458.8 १XNUMX०० $ 225,103.9
के उसले प्रति हप्ता कमाउँछ € 48,449.5 £ 42,664.8 $ 52,349.75
के उसले प्रति दिन कमाउँछ € 6,921.36 £ 6,094.97 $ 7,478.54
के उसले प्रति घण्टा कमाउँछ € 288.39 £ 253.95 $ 311.6
के उसले प्रति मिनेट कमाउँछ € 4.81 £ 4.23 $ 5.19
के उसले प्रति सेकेन्ड कमाउँछ € 0.08 £ 0.07 $ 0.09
तपाईंले Dayot Upamecano हेर्न शुरू गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… जर्मनी मा औसत मानिस जो वरिपरि कमाउँछ € 3,770 कम्तिमा एक महिना काम गर्नु आवश्यक पर्दछ 4.6 वर्ष कमाउन € 208,333। यो रकम डायोटले कमाउन शुरू गर्यो (एक महिनामा) जब उनले रेड बुल लाइपजिगका लागि हस्ताक्षर गरे।
तथ्य # १: उसको फिफा रेटिंगले के भन्छ?
ठूला सम्भावना भएका फुटबलरहरू जहिले मागद्वारा हुन्छन् फिफा क्यारियर मोड प्रेमीहरू जब नयाँ फिफा जारी हुन्छ। Dayot Upamecano FIFA आँकडाले उनी ठूलो सम्भावना भएकाहरू मध्ये एक हो भनेर प्रकट गर्दछ। कसलाई थाँहा छ?… ऊ भविष्यको विश्वको सर्वश्रेष्ठ रक्षक पनि हुन सक्छ।
डायोटको फिफा तथ्या .्कले ठूलो सम्भावना प्रकट गर्दछ - ऊ पक्का छ कि विश्वमा सर्वश्रेष्ठ डिफेन्डर बन्ने सम्भावना छ।
तथ्य # १: हुर्कदै गर्दा उसको आइडल को थियो ?:
बच्चाको रूपमा, डेयोटले फ्रान्सको टीमलाई हेरे जहाँ उनीसँग उनका रोल मोडेलहरू छन्। एक विशेष व्यक्ति यी रोल मोडेल बीच बाहिर खडा छ। उहाँ जस्तो डिफेन्डर होइन, तर पौराणिक बाहेक अरू कुनै छैन Zinedine Zidane. तपाईंलाई थाँहा थियो?… यो प्रेम को लागी थियो Zizou यो उनको मिडफिल्डरको रूपमा खेल्ने बनाएको थियो जब ऊ जवान थियो।
तथ्य # १: Dayot Upamecano धर्म भनेको के हो ?:
हामीसँग प्रमाण छ कि डायोट उपमेकोनोका आमा बुबाले उनलाई इसाई धार्मिक विश्वासको अनुरुप हुर्काएको हुन सक्छ। फुटबलर ठूलो छ र आफ्नो धर्मको बारे लजालु छैन। उनले क्रूसमा क्रूसको चिन्ह लगाएको घाँटीबिना लगाउँदछन्, एउटा यस्तो घटना जसले त्यसले क्याथोलिक हुन सक्छ भन्ने संकेत गर्दछ।
Dayot Upamecano धर्म को एक सूचक।
अधिक, प्रत्येक म्याच पछि, Dayot को सामान्य बानी छ- "धन्यवाद प्रभु ".
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो पढ्नको लागि धन्यबाद डेट अपमाकोानो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।